musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » ushanyi » Galapagos vashandisi vekushanya: Hapanazve kukura kwekushanya!
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Ecuador Breaking Nhau • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Sangano reInternational Galapagos Tour Operators Association (IGTOA) rakadaidzira hurumende yeEcuador kuti ideredze kukura kwepasirese kwakatenderedza nyika muzvitsuwa zveGalapagos uye kudzora zvine hungwaru chikamu chinokurumidza kukura cheindasitiri yekushanya yezvitsuwa.
Mutsamba yakatumirwa kuna Gurukota Rezvekushanya kuEcuador, Enrique Ponce de León musi waFebruary 5, IGTOA yakaratidza kushushikana kwayo kuti mwero wekukura kwekushanyirwa kwenyika pasi pemakore gumi apfuura hauna kugadzikana uye zvinogona kukonzera kukuvara kusingadzokere kune zvisikwa zvine mukurumbira zvezvitsuwa. uye mhuka dzesango dzinoshamisa.
Pakati pa2007 kusvika 2016, maererano neGalapagos National Park nhamba, vashanyi vese vanosvika muGalapagos Islands vakawedzera nezvikamu makumi matatu nezvipfumbamwe kubva muzana (kubva pamazana gumi nematanhatu kusvika mazana maviri nemakumi maviri nemashanu). Munguva imwe chete iyoyo, huwandu hwevashanyi vari kutora chikamu munzvimbo dzinoenda pasi hwakawedzera kubva pamakumi manomwe nepfumbamwe kusvika pa39 (161,000 muzana inowedzera), nepo kushanya kune ngarava kwakadzikira, kubva pavangangosvika 225,000 vashanyi kusvika pamusoro pe79,000 (inodonhedza muzana muzana) .
“Mazhinji emakambani edu enhengo anotengesa nzendo dzinoenda kunzvimbo kuGalapagos. Hatipikisane nekushanyirwa kunoitwa pasi pese, uye, zvakanyatsogadziriswa, tinozvitsigira, "akadaro Jim Lutz, Mutungamiri weBhodi reGTOA uye Mutungamiriri weVaya Adventures. “Asi chokwadi chiripo ndechekuti zana muzana rekukura mukushanya kweGalapagos mumakore gumi apfuura kuri kukonzerwa nekushanyirwa kwenyika. Uye kusiyana nekushanya-kwakavakirwa kune ngarava, uko kune de facto muganho pane huwandu hwevatakurwi, hapana muganho chero pahuwandu hwevanhu vanogona kuita nzendo dzepasirese. Hazvina kugadzikana kuva nekukura kusingaperi mukushanya kwepasi munzvimbo ino isina kusimba. ”
Kubva kuma1970s kusvika kutanga kwema2000, ruzhinji rwevashanyi veGalapagos vakapinda mukushanya kwakavakirwa nengarava, iyo yakagara ichizivikanwa pasi rose semuenzaniso wevashoma, wakarongedzwa zvakanaka kutashanya. Hurumende yeEcuador yakaisa huwandu hwakaomarara pane huwandu hwenzvimbo (mibhedha) inobvumidzwa pazvikepe zveGalapagos ngarava uye yaisa kapu ye100 sehuwandu huwandu hwevatakuri chero ngarava inogona kutakura. Iko hakuna zvirambidzo zvakafanana kana mirawo inodzora kutarisisa kwepasirese kwepasi. Kana iyo zvazvino chiyero chekukura chichienderera chisina kudzikiswa, pachave nevanopfuura mamirioni imwe vashanyi pagore kuGalapagos Islands mune isingasviki makore makumi matatu nemashanu.
Midhiya epasi rese ari kutanga kucherechedza zvingangoreva kukura kwekusadzora kwekushanya. Ese CNN uye muperekedzi webhuku rinotungamira Fodor achangobva kuisa zviwi pazvinyorwa zvavo zvekusashanyira mu2018, vachinongedzera kunetseka pamusoro pekuwedzera kwekukanganisa kwekushanya ikoko.
Muna 2007, UNESCO yakatora danho rinoshamisa rekuisa zvitsuwa paRondedzero yeWorld Heritage Sites muDanger mukupindura kutyisidzira kwakasiyana siyana, kusanganisira kushanya kusingadzoreki uye kukura kwehuwandu. Zvitsuwa zvakabviswa kubva pane zvakanyorwa muna 2010, asi muna Chikunguru 2016 UNESCO zvakare yakaridza mabhero ekuburitsa nekuburitsa gwaro raitaura kushomeka kweEcuador kwemaitiro akajeka ekudzvinyirira kukura kwekushanya nekukurumidza sechikonzero chekushushikana kukuru.
"Hakuna imwe nzvimbo paPasi seGalapagos, nzvimbo yaunogona kuswedera padyo nemhuka dzesango," anodaro IGTOA nhengo yebhodhi Marc Patry, wekambani yenhengo ye IGTOA CNH Tours. “Ndakagara ndichifadzwa nebasa rakaitwa nehurumende yeEcuador kunyatsoongorora kushanya kunoenderana nezvikepe uko. Asi kutaura chokwadi, ini handisi kuona chero humbowo hwekuti irikubata nekushanya kwepasi-kwakavakirwa nedanho rakafanana rekunetseka. Tiri kuona tsunami yekukura mune iyo chikamu. Kunze kwekunge chimwe chinhu chaitwa munguva pfupi, zvine njodzi yekudzikisira mabasa ese akanaka akaitwa kusvika parinhasi, ”akadaro Patry, uyo aive neCharles Darwin Research Station kwemakore mana, achiteverwa nemakore gumi nerimwe achishanda kuUNESCO's World Heritage Center.
Sekureva kwemasayendisiti, kukura kusingadzorwe kwekushanya kunoisa tyisidziro dzinoverengeka kuGalapagos Islands. Mukuru pakati pavo kugona kwemarudzi matsva anoparadza kuti asvike sekutakura zvinhu uye vanosvika nendege vanowedzera. Yakanyanya inoparadza Wild Blackberry, semuenzaniso, yakatungamira mukurasikirwa ne 99 muzana yematunhu eScalesia masango pazvitsuwa zvikuru zviviri, Isabela neSanta Cruz. Nekuwedzera kupi kwekushanya kwepasi-kunouya kwakawanda kutakura zvinhu, zvivakwa zvakawandisa, migwagwa yakawanda, uye kumanikidza kwakawanda kwekuenderera mberi kukura, chimwe chinhu chinongonyanya kuoma kumisa icho chichienderera mberi.